baakad 777 More
baakad 777 More 3 sano 1 bil ka hor #631
Waan jeclahay xirmooyinka mega ee '777 mega' oo aad isugu geyso fsx, id waan jeclahay inaan arko baakado cusub oo loogu talagalay 777 maadaama aad kaliya sameysay 777-200LR. Xirmooyin loogu talagalay -200ER iyo -300ER ayaa fiicnaan lahaa. Ive ayaa ka heshay xirmooyin kuwaan meelaha kale ah laakiin VC-kooda ayaa si xun loogu dejiyaa marka loo eego qodobbada muhiimka ah.
Rajo inaad u eegi karto taas.
baakad 777 More 3 sano 1 bil ka hor #636
Way adag tahay in wax laga beddelo VC ... ama ugu yaraan, sidaa daraadeed waxaan maqlaa lol Waxaan heystaa 737 leh bambo aan wanaagsaneyn iyo VC fiican (inkastoo aanan isticmaalin lol) iyo HADDII, 'VC ku bedeshay shimbiraha kale ee 2 ee midkaas.
baakad 777 More 3 sano 1 bil ka hor #637
Wanaagsan ma aha VC oo u baahan in la kala beddelo, inkastoo aan ogahay in ay adag tahay, oo aan u sameeyey dhammaan noocyada freeware. sida ay dadka kale u doorteen albaabbada inay furaan.
Tusaale ahaan, 777 Rikoooo waxay isticmaashaa dhamaan shandada + dhexdhexaadinta si loo furo albaabbada lagama maarmaanka ah sida sare, fmc iwm. Dadka kale, u diyaari inay furaan isticmaalka wanaagsan, samaynta nd / pfd ballaaran, iwm. wax kasta oo la gali karo guddiga sare ee loo yaqaan "VC" laftiisa ayaa ku xaddidan waxa aad ku cadaadin karto. Laakiin, si sahlan u beddelaan faylasha gudahooda ee loogu talagalay rikoooo waxay ka dhigeysaa mid wanaagsan.
Waxaa intaa dheer, waxaan u maleynayaa in rikoooo uu ku fiicnaan lahaa inuu ku xiro iyaga oo wax badan ku daraya ururinta
baakad 777 More 3 sano 1 bil ka hor #638
Waxaan u maleynayaa inaad bedeli karto taas oo ku jirta panel.cfg
baakad 777 More 3 sano 1 bil ka hor #639
Waan ogahay inaan u baahnahay in aan wax ka badalo guddiga .fgg si aad ugu darto walxaha, sida GPS. Anigu ma arko sababta aadan u noqon karin oo keliya dib u habeynin amarka iyo waxa aan ...
baakad 777 More 3 sano 1 bil ka hor #641
Waxaan horay u sameeyay waxaas oo dhan, waxaan ku soo noqday inaan soo jeediyo sameynta xirmooyin 777 ah, ama baakad ku jirta 200 iyo 300 halkii ay ka ahaan lahaayeen 200LR oo keliya. Sida kaliya ee uu xirmokiisa A330 wuxuu ku jiri karaa A332 iyo A333
baakad 777 More 3 sano 1 bil ka hor #642
Waxaan sidoo kale sida pack a n-2 leh hawada france midabka cusub iyo hawada canada, KLM midabka cusub, United Airlines, JAL, Ana, Delta, Air Austral, LH xamuulka, B777-300ER KLM - hawada canada Emirates - ahaa Godey - Tam-Swiss -BA - Air ficitve transat. mahadsanid
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.659